Daadad ugu yaraan labo qof ku dilay gobolka Nugaal - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDaadad ugu yaraan labo qof ku dilay gobolka Nugaal
Roobka ayaa imaanaya iyadoo gobolku uu wajahayo abaar daran. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Daad ay sababeen roobab mahiigaan ah ayaa ku dilay ugu yaraan labo qof gobolka Nugaal ee Puntland maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Hooyo iyo wiil ay dhashay ayaa daadka ku dhintay xilli ay rabeen in ay ka gudbaan tog kuyaala deegaanka Qundheed oo hoostaga degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal.
Asbuucii lasoo dhaafay, dowladda Puntland ayaa dadka reer miyiga ah ku wargelisay in ay u baxaan dhulka sare si looga gaashaanto macquulnimada haddii ay khatar ka dhalato roobka.
February 5, 2017 Madaxweynaha Puntland oo u safray Muqdisho